» Yaa dila Wariyayaasha + DHAGEYSO Barnaamij laga diyaariyay
Yaa dila Wariyayaasha + DHAGEYSO Barnaamij laga diyaariyay
Nov 14, 2012 - 1 Jawaab	Dhowaanahaan waxaa si aad ah usoo badanayay dilka Wariyayaasha ka howlgala Gudaha dalka haba ugu badnaato Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Sanadkii lasoo dhaafay oo kaliya Waxaa Soomaaliya lagu dilay 18 Wariye inta ugu badan waxaa lagu dilay Magaalada Muqdisho, waxaa sidoo kale la dhaawacay wariyayaal kale, kuwo badanna dalka ayaa lagasoo qaxiyay.
Wariyayaasha Qaxootiga ah meesha ugu badan ee ay Joogaan Waa Magaalooyinka Nairobi iyo Kampala, sidoo kale wariyayaasha wexey u qaxeen wadanka Koonfur Afrika.
Wariyayaasha waxaa Gudaha ku heysta dhibaato aad u badan, wexey ka takootanyihiin Shacabka caadiga ah maadaama si gaar ah loo beegsanayo, sida Siyaasiyiinta iyo madaxda kale ee dowladda.
Wariyaha ku sugan Gudaha ayaa xiliga uu waajibaadkiisa Shaqo gudanayo waxaa loo geystaa Hanjabaado cabsi galin ah si uu u aamuso.
Hadaba Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA ayaa barnaamij ka diyaarisay Yaa dilaya Wariyaha, wexeyna ku wareysatay Wariyayaal Caan ah oo iyagu kusoo dhaawacmay ama wax ka og cidda dilka u geysata Wariyayaasha.
Wariyayaasha La wareystay Waxaa kamid ah C/xakiim Cumar Jimcaale oo Mid kamid ah Gacmihiisa ku waayay Howsha Saxaafadda Maadaama Kooxo Hubeysan ay Gurigiisa ku dhaaweceen Sanadii 2007, waxaa sidoo kale Barnaamijka Lagu Wareysanayaa Maxamed Nuur Maxamed Shariifka oo Kamid ah Wariyayaasha ugu Caansan Magaalada Muqdisho, Dhowaanna ay Dhaaweceen Kooxo Hubeysan.
Halkaan Hoose ka dhageyso Barnaamijka oo aad u Xiiso badan.
Waxaa jira Wariyayaal u shaqeeya Al-shabaab oo iyagu wax ka qorsheeya dilka Wariyayaasha Kale waxaana kamid ah Xasan Xanafi Xaajo oo Horey uga mid ahaa Wariyayaasha Muqdisho, iminkase Al-shabaab la saftay oo inta badan Wariyayaasha Shirqoolay iyo Ismail Istiila oo isaguna kamid ah Dambiilayaasha, iyo Jibriil Yuusuf oo isaguna Wariyayaasha Shabaabka kamid ah kana tirsan Idaacadda Afka Shabaab ku hadasha.
Halkaan ka dhageyso Jibriil oo ku Faanaya Qaraxii dhowaan lagu laayay Wariyayaashii ku sugnaa Maqaayadda The Village ee ku taala Guriga Hooyooyinka.
« Warbixinta Ka HoreysayWebsite Caan ah oo Af-Soomaali wax ku qora oo la ogaaday in Milataryga mareykanka ay Leeyihiin	Warbixinta Xigto »Ururka Ahlu Sunna Wal Jameeca oo soo dhaweeyay in Ansixinta Xukuumadda, Baaqyana u diray Xukuumadda Soom aaliya.	One Response to Yaa dila Wariyayaasha + DHAGEYSO Barnaamij laga diyaariyay
Cabdi axmed cantar says:	November 14, 2012 at 9:29 am	Asc dhaman runtii in lalaayo wariyayaasha waa arin aad uxun waxayna ilatahay in dadka la indha tirayo hadii dadka wax galkaa lalaynayo waxanse ugu baaqayaa saxafiyiin dulqaadka badiya dadkiinana daacad ugu adeega kuwan idiin diirnaxayna mar uunba dabarkood lajariye